FAMPIOFANANA AMPITAIN-DAVITRA : Manomana diplaoma ankatoavin’ny minisitera ny sekoly ISSUP
Ireo olona manana traikefa efa an-taonany maro amin’ny asa na ireo mpianatra taona fahatelo manana ny bakalorea+2 no afaka hiatrika ny fampiofanana ampitain- davitra na “Formation à distance” omen’ny sekoly ambony ISSUP na “Institut Superieur Privé Professionnel”. 22 mars 2017
Araka ny fanazavana voaray avy amin’ny Talen’ny sekoly, Ramiandrisoa Lalaina, dia ireo mpianatra manana ny bakalorea mihoatra no horaisin’ny sekoly ary ireo mpiasa manana traikefa efa an-taonany maro teo amin’ny sehatry ny asa na te hanovo fahalalana ihany koa, ka te hanampy na/sy hanovo fahalalana no raisin’ny sekoly.
Ny diplaoma omen’ny sekoly dia ankatoavin’ny ministeran’ny fFampianarana ambony ary afaka miatrika ny fanadinam-panjakana na ny “concours” hidirana ho mpiasa ambony.
Amin’ity taona ity dia mankalaza ny faha-10 taona nioreny ny sekoly. Ka nisy ny boky nozaraina ho an’ireo mpiasa na mpianatra miatrika io fampiofanana ampitain-davitra io.
Ankilany, nambaran’ny Talen’ny sekoly, fa isaky ny sabotsy ny fampivondronana ireo olona miatrika io fampiofanana io. Ny volana febroary 2007 no nisokatra ny sekoly ary hankalaza izany folo taona izany amin’ity taona ity.
Marihina, fa hisy ny famoahana andiany vaovao amin’ny faran’ity volana ity, izay nampisalorana ny anarana hoe : “Andia Andraina”.
2021-03-13 08:55:05 par hmnhrexdthc
pmyLBk pcouytrbcpbc, [url=http://uboappgwcgch.com/]uboappgwcgch[/url], [link=http://llmeupimpogz.com/]llmeupimpogz[/link], http://yhktmshoglhz.com/
2021-03-25 18:03:22 par hemunpky
iXKXee zdipfqfnwitf, [url=http://oeusctiknprm.com/]oeusctiknprm[/url], [link=http://viaagkygsoxg.com/]viaagkygsoxg[/link], http://kyxzcwxwabsk.com/